I-Sonochemistry yinkambu yamakhemikhali lapho i-high-intensity ultrasound isetshenziselwa ukuheha, ukusheshisa nokuguqula ukuphendula kwamakhemikhali (synthesis, catalysis, degradation, polymerization, hydrolysis njll). I-cavitation eyenziwe nge-Ultrasonically ibonakala ngezimo ezihlukile zamandla aminyene, ezikhuthaza futhi ziqinise ukusabela kwamakhemikhali. Izinga lokuphendula okusheshayo, isivuno esikhulu nokusetshenziswa kwama-reagents aluhlaza okotshani, okunamandla kuguqula i-sonochemistry ibe yithuluzi elinenzuzo enkulu ukuthola ukutholakala kwamakhemikhali okuthuthukile.
I-Sonochemistry yinkambu yocwaningo nokucubungula lapho ama-molecule enza ukusabela kwamakhemikhali ngenxa yokusetshenziswa kwe-high-intensity ultrasonication (isb. 20 kHz). Umkhuba obhekene nokusabela kwe-sonochemical yi-acoustic cavitation. I-acoustic noma i-ultrasonic cavitation yenzeka lapho amagagasi anamandla e-ultrasound ahlanganiswa abe uketshezi noma udaka. Ngenxa yokushintshana kwemijikelezo ephezulu yengcindezi / yengcindezi ebangelwe ngamandla amagagasi e-ultrasound kulolo ketshezi, ama-vacuum bubbles (cavitational voids) akhiqizwa, akhula ngaphezu kwemijikelezo eminingi yengcindezi. Lapho ibhamuza le-vacitational vacuum lifinyelela osayizi obuthile lapho lingakwazi khona ukumunca amandla amaningi, i-vacuum bubble ingena ngodlame futhi idale indawo eshisayo enamandla kakhulu. Le ndawo eshisayo eyenzeka endaweni ibhekene namazinga okushisa aphakeme kakhulu, izingcindezi nokusakazwa okuncane kwamajetshi ashesha ngokweqile.
I-Sonochemical reactor: I-sonication enamandla ne-cavitation evelayo iqala futhi iqinise ukusabela kwamakhemikhali futhi ingashintsha izindlela.
I-Acoustic Cavitation nemiphumela ye-High-Intensity Ultrasonication
I-acoustic cavitation, evame ukubizwa nangokuthi i-ultrasonic cavitation, ingahlukaniswa ibe yizinhlobo ezimbili, i-cavitation ezinzile neyesikhashana. Ngesikhathi se-cavitation ezinzile, i-bubble cavitation igudluka kaningi ezungeze ububanzi bayo bokulingana, ngenkathi i-cavitation yesikhashana, lapho ibhamuza elifushane elifinyelela khona ekushintsheni komthamo omkhulu emijikelezweni embalwa ye-acoustic futhi liphela ekuweni okunamandla (uSuslick 1988). Ukuqina okuzinzile nokudlulayo kungenzeka ngasikhathi sinye kusixazululo futhi igwebu elenza i-cavitation elizinzile lingaba yimbotshana yesikhashana. I-bubble implosion, okuyisici se-cavitation yesikhashana kanye ne-sonication enamandla amakhulu, idala izimo ezahlukahlukene zomzimba kufaka phakathi amazinga okushisa aphakeme kakhulu ka-5000-25,000 K, izingcindezi ezifika kubha ezi-1000 eziningana, nemifudlana engamanzi ene-velocities ezifika ku-1000m / s. Kusukela ukuwa / ukufakwa kwamabhamuza e-cavitation kwenzeka ngaphansi kwe-nanosecond, amazinga okushisa kakhulu nokupholisa ngokweqile kwe-1011 Ama-K / s angabonakala. Izinga lokushisa eliphakeme kangaka nokwehluka kwengcindezi kungaqala futhi kusheshise ukusabela. Mayelana nemifudlana eyenzekayo ketshezi, lawa ma-microjets anejubane eliphezulu abonisa izinzuzo eziphakeme kakhulu uma kukhulunywa ngama-slurries aqinile a-heterogeneous solid. Amajetshi ajika oketshezi ebusweni ngokushisa okugcwele nengcindezi yebhamuza eliwayo futhi libangela ukuguguleka komhlaba ngokungqubuzana kwe-interparticle kanye nokuncibilika kwasendaweni. Ngenxa yalokho, ukudluliswa okukhulu kwesixazululo kuyabonakala.
I-Ultrasonic cavitation ikhiqizwa kahle kakhulu kuziphuzo futhi izinyibilikisi izingcindezi zomphunga ophansi. Ngakho-ke, imidiya enezingcindezi zomphunga ophansi iyathandeka ekusetshenzisweni kwe-sonochemical.
Njengomphumela we-ultrasonic cavitation, amandla amakhulu adaliwe angashintsha izindlela zokuphendula ziye emizileni esebenza kahle, ukuze kuguqulwe okuphelele kanye / noma ukukhiqizwa kwemikhiqizo engafuneki.
Isikhala esiminyene ngamandla esidalwe ukuwa kwamabhamuza e-cavitation sibizwa ngokuthi indawo eshisayo. Imvamisa ephansi, amandla amakhulu e-ultrasound ebangeni lama-20kHz kanye nekhono lokwenza ama-amplitudes aphakeme kusungulwe kahle ekwakhiweni kwezindawo ezishisayo kakhulu nezimo ezithandekayo ze-sonochemical.
Imishini yaselebhu ye-Ultrasonic kanye nezimboni ze-ultrasonic zezinqubo zezinqubo ze-sonochemical zentengiso zitholakala kalula futhi zifakazelwa njengezithembekile, zisebenza kahle, futhi zinobungani bemvelo kulab, umshayeli kanye nesikali sezimboni ngokuphelele. Ukuphendula kwe-Sonochemical kungenziwa njenge-batch (isb., Isitsha esivulekile) noma inqubo yoku-inthanethi kusetshenziswa i-reactor cell cell evaliwe.
I-Industrial ultrasonicator I-UIP2000hdT (2kW) nge-sonochemical inline reactor.
I-Sono-synthesis noma i-sonochemical synthesis ukusetshenziswa kwe-ultrasonically eyenziwe nge-cavitation ukuze kuqalwe futhi kukhuthazwe ukusabela kwamakhemikhali. I-high-power ultrasonication (isb., Kuma-20 kHz) ikhombisa imiphumela enamandla kuma-molecule kanye nokuhlanganiswa kwamakhemikhali. Isibonelo, imiphumela ye-sonochemical evela ku-sonication enamandla ingaholela ekuhlukaneni kwama-molecule, kudale ama-radicals wamahhala, kanye / noma nokuguqula izindlela zamakhemikhali. Ukuhlanganiswa kwe-Sonochemical ngakho-ke kusetshenziselwa kakhulu ukwenziwa noma ukuguqulwa kwezinhlobonhlobo zezinto ezakhiwe nge-nano. Izibonelo zama-nanomaterial akhiqizwa nge-sono-synthesis angama-nanoparticles (ama-NPs) (isb., Ama-NP egolide, ama-NP esiliva), izingulube, izinhlayiya ze-core-shell, i-nano-hydroxyapatite, izinhlaka zezinsimbi eziphilayo (ama-MOFs), izithako ezisebenzayo zokwenziwa kwemithi (ama-API), ama-nanoparticles ahlotshiswe nge-microsphere, ama-nano-composites phakathi kwezinye izinto eziningi.
Isithombe se-TEM (A) nokusatshalaliswa kosayizi wezinhlayiyana (B) zama-nanoparticles esiliva (Ag-NPs), ahlanganiswe nge-sonochemically ngaphansi kwezimo ezinhle.
Okuphinde kusetshenziswe kabanzi i-crystallization (sono-crystallization) ekhiqizwa nge-ultrasonically, lapho i-power-ultrasound isetshenziselwa ukukhiqiza izixazululo ze-supersaturated, ukuqala i-crystallization / imvula, nokulawula ubukhulu be-crystal kanye ne-morphology nge-ultrasonic process parameters. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-sono-crystallization!
Ukwenza i-sonicating ukumiswa kwamakhemikhali noma isixazululo kungathuthukisa kakhulu ukusabela okokusebenza. Amandla e-sonochemical anciphisa isikhathi sokuphendula, athuthukise ukushisa nokudluliswa kobuningi, okugcina kubangele ukwanda kwesilinganiso samakhemikhali, isivuno kanye nezinto ezikhethiwe.
Kunezinqubo eziningi zokuhlinzekela, ezizuzisa kakhulu ekusetshenzisweni kwamandla e-ultrasound kanye nemiphumela yayo ye-sonochemical. Noma yikuphi ukuphendulwa kwesigaba se-heterogeneous phase transfer catalysis (PTC) okubandakanya uketshezi olubili noma ngaphezulu olungabonakali noma ukwakheka okuqinile oketshezi, izinzuzo ezivela ku-sonication, amandla e-sonochemical kanye nokudluliswa kwesisindo okuthuthukisiwe.
Isibonelo, ukuhlaziywa okuqhathaniswayo kwe-peroxide oxidation ethulile ne-ultrasonically-catalytic wet ye-phenol emanzini iveze ukuthi i-sonication inciphise umgoqo wamandla wokuphendula, kepha ayibanga nomthelela endleleni yokuphendula. Amandla okwenza kusebenze i-oxidation ye-phenol ngaphezulu kwe-RuI3 i-catalyst ngesikhathi se-sonication itholwe iyi-13 kJ mol-1, eyayincane ngokuphindwe kane uma iqhathaniswa nenqubo ye-oxidation ethule (57 kJ mol-1). (URokhina et al, 2010)
I-Sonochemical catalysis isetshenziselwa ngempumelelo ukwenziwa kwemikhiqizo yamakhemikhali kanye nokwenziwa kwezinto ezingaphili ezihleliwe ezinjengezinsimbi, ama-alloys, izinhlanganisela zensimbi, izinto ezingezona ezensimbi, nezinhlanganisela ezingaphili. Izibonelo ezijwayelekile ze-PTC esizwa nge-ultrasonically yi-transesterification yama-fatty acids mahhala abe yi-methyl ester (biodiesel), i-hydrolysis, i-saponification yamafutha yemifino, i-sono-Fenton reaction (izinqubo ezinjenge-Fenton), ukonakala kwe-sonocatalytic njll.
Funda kabanzi mayelana ne-sono-catalysis nezinhlelo zokusebenza ezithile!
Ezinye Izicelo zeSonochemical
Ngenxa yokusetshenziswa kwawo okuhlukahlukene, ukwethembeka nokusebenza okulula, izinhlelo ze-sonochemical ezifana ne- UP400St noma I-UIP2000hdT zibalwa njengemishini esebenza kahle ekuphenduleni kwamakhemikhali. Amadivayisi we-Hielscher Ultrasonics sonochemical angasetshenziselwa kalula i-batch (i-beaker evulekile) ne-sonication eqhubekayo emgqeni usebenzisa i-sonochemical flow cell. I-Sonochemistry kufaka phakathi i-sono-synthesis, i-sono-catalysis, ukonakala, noma i-polymerization isetshenziswa kakhulu ekhemistry, i-nanotechnology, isayensi yezinto zokwakha, ezemithi, i-microbiology kanye nakwezinye izimboni.
Izinsiza kusebenza ze-Sonochemical ezisebenza kakhulu
I-Hielscher Ultrasonics ingumhlinzeki wakho ophezulu wama-ultrasonicators amasha, we-state-of-the-art, i-sonochemical flow cell, ama-reactor kanye nezinsiza zokuphendula kahle nangokuthembekile kwe-sonochemical. Onke ama-ultrasonicators ama-Hielscher aklanywe ngokukhethekile, akhiqizwa futhi ahlolwa ekomkhulu lekhaya le-Hielscher Ultrasonics eTeltow (ngaseBerlin), eJalimane. Ngaphandle kwezindinganiso zobuchwepheshe eziphakeme kakhulu nokuqina okuvelele nokusebenza kwe-24/7/365 kokusebenza kahle kakhulu, ama-ultrasonicators ama-Hielscher kulula futhi anokwethenjelwa ukusebenza. Ukusebenza kahle okuphezulu, isoftware ehlakaniphile, imenyu enembile, ukulawulwa kwedatha okuzenzakalelayo nesilawuli kude sesiphequluli yizici ezimbalwa nje ezihlukanisa iHielscher Ultrasonics kwabanye abakhiqizi bemishini ye-sonochemical.
I-amplitude ukufuduka ngaphambili (ithiphu) ye-sonotrode (eyaziwa nangokuthi i-ultrasonic probe noma uphondo) futhi kuyisici esiyinhloko esithonya i-ultrasonic cavitation. Ama-amplitudes aphakeme asho ukuqina okukhulu. Ubukhulu obudingekayo be-cavitation buxhomeke kakhulu ohlotsheni lokuphendula, ama-reagents amakhemikhali asetshenzisiwe kanye nemiphumela eqondisiwe yempendulo ethile ye-sonochemical. Lokhu kusho ukuthi ubukhulu kufanele buguqulwe ngokunembile ukuze kutshale amandla we-acoustic cavitation ezingeni elifanele. Onke ama-ultrasonicators ama-Hielscher angashintshwa ngokuthembekile nangokuqondile nge-digital digital control ku-amplitude ekahle. Izimpondo ze-booster zingasetshenziswa ngokwengeziwe ukunciphisa noma ukukhulisa i-amplitude ngemishini. I-Ultrasonics’ amaprosesa asezimboni e-ultrasonic angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7. Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala.
Ukulawulwa Kokushisa Okuqondile Ngesikhathi Sokusabela Kwe-Sonochemical
Endaweni eshisayo ye-cavitation, amazinga okushisa aphakeme kakhulu ezinkulungwane eziningi ze-degrees Celsius angabonakala. Kodwa-ke, lawa mazinga okushisa aqine akhawulelwe endaweni yangaphakathi kumzuzu nangaphakathi kwebhamu lokufaka le-cavitation. Esixazululweni esiningi, ukukhuphuka kwamazinga okushisa kusuka ku-implosion amabhamuza owodwa noma ambalwa we-cavitation ayibalulekile. Kepha ukuqhubeka kwe-sonication isikhathi eside kungadala ukwanda kokushisa kuketshezi oluningi. Lokhu kwanda kokushisa kunomthelela ekuphenduleni kwamakhemikhali amaningi futhi kuvame ukubhekwa njengokuzuzisa. Kodwa-ke, ukusabela okwehlukile kwamakhemikhali kunamazinga okushisa ahlukahlukene okusabela kahle Lapho izinto ezizwela ukushisa ziphathwa, ukulawula ukushisa kungadingeka. Ukuze kuvunyelwe izimo ezishisayo ezifanele phakathi nezinqubo ze-sonochemical, i-Hielscher Ultrasonics inikeza izixazululo ezahlukahlukene eziyinkimbinkimbi zokulawula ukushisa okuqondile ngesikhathi senqubo ye-sonochemical, njengama-sonochemical reactors namaseli okugeleza anamajackethi okupholisa.
Amaseli ethu okugeleza kwe-sonochemical nama-reactor ayatholakala ngamajackethi okupholisa, asekela ukushabalalisa ukushisa okusebenzayo. Ngokuqapha okuqhubekayo kokushisa, ama-Hielscher ultrasonicators afakwe inzwa yokushisa engaxhuma, engafakwa kuketshezi ukuze kukalwe njalo izinga lokushisa ngobuningi. Isoftware eyinkimbinkimbi ivumela ukusethwa kwebanga lokushisa. Lapho umkhawulo wokushisa weqiwe, i-ultrasonicator iyama isikhashana kuze kube yilapho izinga lokushisa kuketshezi lehle lafika endaweni ethile ebekiwe bese liqala ukuzitholela futhi. Zonke izilinganiso zokushisa kanye neminye imininingwane yenqubo ye-ultrasonic ebalulekile iqoshwa ngokuzenzakalela ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi futhi lingabuyekezwa kalula ngenqubo yokulawula.
Ithempelesha ipharamitha ebalulekile yezinqubo ze-sonochemical. Ubuchwepheshe obuchazekile bukaHielscher bukusiza ukuthi ugcine ukushisa kohlelo lwakho lokusebenza lwe-sonochemical ebangeni elifanele lokushisa.